यो हो महेश बस्नेतको व्यवस्थापनमा आज सांसदहरु राखेको भक्तपुरको रिसोर्ट, यसरी सांसद राख्नु सही की गलत? – News Nepali Dainik
यो हो महेश बस्नेतको व्यवस्थापनमा आज सांसदहरु राखेको भक्तपुरको रिसोर्ट, यसरी सांसद राख्नु सही की गलत?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ३०, २०७८ समय: २०:०७:०९
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना सांसदलाई भक्तपुरको डोलेश्वर भिलेज रिसोर्टमा राखेका छन् ।” बिहीबार दिउँसो पार्टी कार्यालय बबरमहलबाट आफ्नो पक्षका सांसदलाई ठाकुरले भक्तपुरको रिसोर्टमा लगेका हुन्। रिसोर्टमा पुगेका एक सांसदले भने, ‘हामी भक्तपुरमा एकसाथ बसेका छौँ।’ ती सांसदले आफूहरु बसेको ठाउँ भने बताउन चाहेनन्।
Last Updated on: May 13th, 2021 at 8:07 pm